I-Gypsy Vanner, eyaziwa njenge "gypsy horse" | Amahashe eNoti
UJenny monge | | Amahashe, Uhlobo lwehashe
Imvelaphi yohlobo lweGypsy Vanner, eyaziwa njenge «gypsy amahashe», ibuyela kwisiqingatha sesibini senkulungwane ye-XNUMX. Iintsapho zaseBritane nezaseIreland zobuhlanga besigypsy zaqala ukutshintsha iimeyile ababezisebenzisa ngendlela yesiko, ngamahashe. Amahashe omeleleyo ayenakho ukutsala iinqwelo ezinzima kwaye enkosi ekuthambekeni kwawo anokukhweliswa ngaphandle kwaye babekulungele ukuba kunye nosapho lonke.
Zichanekile ngokuchanekileyo iimpawu ezinje ngamandla akhe okudubula okanye isimilo sakhe, yintoni yenze ukuba iiGypsy Vanners zisasazeke kwihlabathi liphela.
Masibazi ngcono kancinci!
Emva kweMfazwe yesibini (II) yeHlabathi, olu luhlobo lwaqala ukwanda kwalo Ndiziva ndisetyenziswa kwiifama, ikakhulu njengehashe eliyidrafti, kodwa nakweminye imisebenzi yamahashe enikwe ukusebenza kwayo.
Nangona ifumene amagama ahlukeneyo kuyo yonke imbali yayo, esele ihleli kwaye eyaziwayo namhlanje yile ibhekisa kwimvelaphi yayo: iGypsy Vanner okanye iGypsy Horse.
Yiyo Uhlobo olumnandi kakhulu ukujonga ngenxa yemibala yalo kunye nobungakanani bayo obumnandi bemane nomsila. Nangona zinokuba zincinci ii-equines, zakhiwe ngokuqinileyo, zinamathambo omeleleyo, iimpuphu ezinkulu kunye namalungu, kunye nokuzinza okuzinzileyo. Makhe sijonge ngakumbi kwi-morphology yayo.
I-anatomy kunye nezihlunu zala mahashe zenza ukuba zikwazi ukutsala iinqwelo ezinzima ngaphandle kokudinwa. Banobude obuphakathi kwe-145 cm ukuya kwi-155 ekubuneni (nangona banokufikelela kwi-168 cm) kunye nobunzima ukuya kuthi ga kwi-635 kg, kuxhomekeke kukutya kwabo kunye nomsebenzi wabo. Ngamahashe acekethekileyo anesifuba esibanzi kunye nomqolo omfutshane. Inayo malunga ikloko yangasemva ejikeleziweyo kwaye apho a Songa kulusu oluqhelekileyo lolo hlobo kwaye kubizwa kubo I-Butt Apple. Zilinganiswe kakuhle ii-equines, azikho nkulu kakhulu okanye zibanzi kakhulu.
Los Izigcina-ntloko zeGypsy Vanner zimi ngokuba zinkulu, into ebenza babe nelifa le- indawo ebanzi yenkxaso. Intamo yomelele, inentloko entle.
Kodwa makhe sithethe ngeempawu ezimbini ezisisiseko zolu hlobo: idyasi kunye nomlinganiswa.
Ekuboneni kokuqala, ngaphandle kwamathandabuzo eyona nto igqame kakhulu kwaye itsalela ingqalelo kuboya. Iinwele zakhe eziluhlaza ezithe nkqo yintoni ekhokelele ekubeni uhlobo olo luqwalaselwe njengelinye omhle kakhulu zehlabathi. Inkqubo ye- amaqatha ahlotshisiwe kwaye asongelwe ngokupheleleyo ngeenwele (ekuthiwa ziintsiba emilenzeni) kunokuba zide zivumele izilwanyana ukuba zifudumale emaphethelweni. Oku kuluncedo kakhulu kwiindawo zaseScotland, eIreland naseNgilani apho iqala khona apho kubanda khona ubusika. Inkqubo ye- imane nomsila zide, le yokugqibela ichukumisa umhlaba, kwaye ngamanzi awileyo.
La Uluhlu oluphambili lolu hlobo luhlobo pint okanye ngokunjalo, ngemibala emnyama nemhlophe. Nokuba ku unokuba nemibala eyahlukeneyo ezinje ngokubhonga okanye imithi ye-chestnut, nangona ihlala idityaniswa noboya be-pinto
Umlingiswa wakhe ulunge kakhulu ngenxa yento ayiyo ilungele ukukhwelwa zizo zonke iintlobo zabakhweli abangenamava, ngakumbi abantwana. Bazi ngokonwaba kakhulu Ukuthelekiswa nezinja. Zonke iimpawu zesimilo sayo kunye nokuthantamisa kunye nokuguquguquka kwayo kwimisebenzi okanye kwimisebenzi enokuyenza, yiyo eyenze ukuba olu hlobo lube nempumelelo enkulu kwihlabathi liphela.
Kufuneka kongezwe, njengophawu, ukuba kubonisiwe ziingcali, ukuba kunjalo enye yeentlobo ze-equine ezibonisa ubukrelekrele obukhulu. Esi sesinye sezizathu zokuba a ubuhlobo bobuhlobo phakathi kwesilwanyana kunye nomniniyo, ukuba nezinye iintlanga akunakwenzeka ukufezekisa. Bakwabizwa ngokuba lihashe labantwana ngokuba nobulali kunye nokuhlonipheka.
Malunga ne-1850 Iintsapho zamaRomany ezihlala e-UK nase-Ireland baqala ukusebenzisa amahashe Ukutshintsha iimeyile ababezisebenzisa ekurhuqeni iikharavani zabo. Ngaphezulu kwekhulu leminyaka, ii-gypsies zizinikezele kwi Ukukhetha ukuzaliswa kweesampuli ukwenza uhlobo lwehashe oluhlangabezana neemfuno zakho kunye neemfuno. Kwakukho ngonyaka Ngo-1996 xa oko kubizwa ngokuba ngama- “gypsy amahashe” kwasekwa uhlobo olusemthethweni ebizwa Gypsy Vanner.
Injongo yayikukudala ihashe elikhethekileyo. Isilwanyana uyakwazi ukutsala iinqwelo zakhe ezinzima imini yonke besitya kwaye besela izixa ezincinci kuphela. Kwangelo xesha, bafuna ukuba njalo mbuna ngokwaneleyo ukuba iphathwe ngamalungu amancinci yosapho. Kwaye, ukuba ayonelanga, ebendinayo into ebukekayo, ngentloko esulungekileyo nengubo engayi kukushiya ungakhathali. Ihashe yayilezi gypsies uphawu lwesimo esihle eluntwini, ke ngoko babeka umfutho omkhulu ekudalweni kohlobo.
Inkcukacha enomdla yolu luhlobo kukuba xa ii-gypsies zibabeka ukuba bathathe iinqwelo, ihashe alizange lime lide lifike apho liya khona. Banokuhamba inani elikhulu leekhilomitha. Yayilhashe elenzelwe uyilo, nangona namhlanje liye laqhelaniswa nesali, kuba ihashe lokukhwela elihle kakhulu.
Isiphumo, ngaphandle kwamathandabuzo, saba yimpumelelo epheleleyo. Ngoku, bayifumene njani? Uphando olwahlukeneyo ngemvelaphi yolu hlobo lubonakalisile ukuba lufumene Impembelelo yehashe laseShire kunye neClydesdales. Nangona kunjalo, amathandabuzo ahleli, kuba ama-gypsies ayegcina iimfihlelo ezazisetyenziselwa ukuzala kunye nokwandiswa kohlobo abafuna ukulufikelela.
Ngo-1996 yasekwa iGypsy Vanner Horse Society, Kunye nencwadi yokuqala yokufunda yohlobo.
Okwangoku, uhlobo luya lusanda ngakumbi kwaye luya luxatyiswa ngakumbi. Zisetyenziswa ngokubanzi kwimiboniso ngenxa yobuhle obukhe sathetha ngabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amahashe kaNoti » Amahashe » Gypsy vanner, i «gypsy amahashe»
Zeziphi izixhobo ozifunayo ukuze ukhwele ihashe?